Ubunjineli base-UK bujika emva kweprojekthi ye-ventilator - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaUbunjineli base-UK bujika emva kweprojekthi ye-ventilator
Ubunjineli base-UK bujika emva kweprojekthi ye-ventilator
Skrolela ezantsi ukuya kwenye iprojekthi ye-ventilator yase-UK
Ibizwa ngokuba yiVentilatorChallengeUK Consortium, ikhokelwa nguDick Elsy (ekunene), Umphathi omkhulu weCatapult, othe kwiveki ephelileyo warhoxisa umhlala-phantsi wakhe ngenxa yokuqhuma kwe-covid-19.
I-Consortium, kwiveki ephelileyo, ibiphanda ngemveliso ye-ventilator eyenzelwe ukudibana 'nenkqubo ye-ventilator eyenziwe ngokukhawuleza' [i-RMVS] yenqanaba eliphakamileyo eliqulunqwe yiArhente yeMveliso yezeMpilo kunye neeNkonzo zezeMpilo [i-MHRA], ngokweCatapult.
"Umlawuli ubandakanyekile kuyo yonke indawo kwaye silindele ukuba sisayine ngqo emva kophicotho-zincwadi," ngokweCatapult. “Iinkampani kule ndibano ngoku zifumene ii-odolo ezisemthethweni ezivela kuRhulumente ngaphezulu kweeyunithi ezili-10,000. I-Consortium izakukhawulezisa imveliso yoyilo ekuvunyelenwe ngalo, kusekwe kubuchwepheshe obukhoyo, obunokudityaniswa ngezinto zokusebenza nakwinxalenye yemveliso yangoku. "
Ngaphakathi komanyano kukho umenzi wee-ventilators zonyango, oya kuthi afumane inkxaso yokuvelisa ukuze kwandiswe imveliso yoyilo esele lukhona olunemvume epheleleyo yolawulo.
Izicelo zomanyano ekungekho namnye ozama ukunxibelelana naye ngqo ngoncedo loncedo, kodwa endaweni yoko cela ukuba unxibelelane nale webhusayithi kaRhulumente. "Oku kuya kuthetha ukuba ukuba sifuna uncedo siza kukwazi ukuwufumana lo matshini kwaye, okwangoku, siya kuba nakho ukugxila kumandla ethu kumsebenzi ongxamisekileyo wemveliso."
Ubungakanani bexabiso eliphakamileyo lobuChule
Umdyarho weBull Bull
Umdyarho weMidlalo yeRenault
Ukucaciswa kwe-ventilator ye-MHRA RMVS kulapha. Kukho inkcazo yesibini ye-MHRA, imigangatho esezantsi yenkqubo yoxinzelelo lomoya oluqhubekayo (CPAP) apha. Akucaci ukuba yeyiphi i-VentilatorChallengeUK esebenza kuyo.
Umgangatho we-ventilator ye-BSI yenziwe yafumaneka simahla apha.
Kwakhona jonga le vidiyo ye-JCB, Dyson, iTekhnoloji yeNtsebenziswano kwi-CoVent protilator protilype.